विओकेको १९ औ बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न :: Press Chautari ::
बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडको १९औं वार्षिक साधारणसभा आज सोमबार सम्पन्न भएको छ । सो सभाले बैंकका शेयरधनीहरुलाई १४ प्रतिशत बोनस शेयर सहित ०.७३६८४२३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने संचालक समितिको प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा संचालन मुनाफा रु. ८९ करोड र खूद मुनाफा रु. ६१ करोड ७१ लाख पु¥याउन सफल भएको थियो ।
साधारण सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बैंकका अध्यक्ष सत्यनारायण मानन्धरले देशको प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिति तथा अस्वभाविक तरलताको वावजुत बैंकले राम्रो सफलता हासिल गरेको जानकारी गराए । उनले बैंकिङ्ग कारोबारको चेतना अभिवृद्घि गर्न स्थलगत प्रशिक्षण कार्यक्रम बढाउँदै लगेको समेत बताए ।
बैंकको निक्षेप तर्पm आ.व. २०६८÷६९ को तुलनामा आ.व. २०६९÷७० मा १०.८४ प्रतिशतले बृद्धि भई रु. २७ अर्ब ७० करोड पुगेको छ भने कर्जा तर्पm १९.३१ प्रतिशतले बृद्धि भई रु. २३ अर्ब ०५ करोड पुगेको छ । शाखा बिस्तार गर्ने सन्दर्भमा यस वर्ष बैंकको शाखा संख्या ४५ बाट ५० पु¥याइएको छ । त्यस्तै ५८ एटीएम् र ८ एक्स्टेन्सन काउन्टरबाट पनि देशका विभिन्न भागमा सेवा पु¥याइरहेको बैंकले बताएको छ ।
मंगलवार, २०७० कार्तिक ११ गते ०४:५९ / Tuesday, Oct 29, 2013 4:59 am